Man United oo €45m ku doonaysa Douglas Costa – Gool FM
Raage March 24, 2018
(Manchester) 24 Maarso 2018 – Sida ku qoran The Daily Mirror naadiga Manchester United ayaa doonaysa inay iibsato Douglas Costa ii u safta Juventus kaasoo ay u diyaariyeen €45m, balse iib maaha.
Sida uu qabo warsidahan reer Ingiriis, Jose Mourinho ayaa isha la helay laacibkan reer Brazil ee garab-weerarka ah, kaasoo xagaagii uun Bayern Munich ugasoo wareegay €46m oo euro, sidaa darteed inay Juve sanad uun kaddib sii iibiso ma aha wax macquul ah.
Douglas Costa ayaa saamayn wanaagsan ku yeeshay kooxdan reer Torino oo uu 3 gool u dhaliyay, 7 kalena dhigay 35 kulan oo rasmi ah fasalkan, sidaa darteed, Bianconeri shaki yari ugama jiro inay haysato 27-jirkan oo ka dheeli kara labada garab ee bidix iyo midig ee weerarka.
Tigidhadii Juventus-Real Madrid oo la wada jartay!
Sami Khedira oo niyada u qaboojiyay taageerayaasha Juventus ka hor kulanka Real Madrid